मोरङ कारागारबाट अायो अहिले सम्म कै डरलाग्दो समाचार – Khabartime
मोरङ कारागारबाट अायो अहिले सम्म कै डरलाग्दो समाचार
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १४:०९ 400 पटक हेरिएको
मोरङ कारागारमा लागूऔषधको मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै आएका एक कैदीले आँखाको उपचार गर्ने बहानामा यौनकर्मी युवतीसँग यौनप्यास मात्र मेटेनन् आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई तिनै यौनकर्मी भिडाएर उम्किएपछि ती प्रहरी हवल्दार अहिले आफैं जेल भित्र पुगेका छन् ।
मोरङको उर्लाबारी – ७ घर भएका कैदी उमेशकुमार चौधरीले बुनेको यौनचाहना पूरा गर्ने योजनामा पर्दा कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार अशोककुमार साह कैदी भगाएको आरोपमा आफैं कैदी बन्न पुगेका हुन् । मोरङ कारागारमा तीन वर्षदेखि कैद भुक्तान गर्दै आएका चौधरी आँखाको उपचार गर्ने बहानामा माघ १५ गते कारागारबाट हवल्दार साहको रोहवरमा विराटनगरस्थित विराट आँखा अस्पताल पुगेका थिए । बाहिर आएपछि अस्पताल जान छाडेर हवल्दार साहसँगको मिलेमतोमा नजिकैको लजमा कोठा बुक गरेर यौनकर्मी युवतीसँग कैदी चौधरीले आफ्नो यौनप्यास मेटाएका थिए । आफूले यौनप्यास मेटेपछि उनले आफ्नो साथमा आएका हवल्दार साहलाई यौनसम्पर्क गर्न होटलको कोठामा पठाएर आफूचाहिँ फरार भए ।
अवैध लगूऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परी २०७२ चैत २ गते अदालतबाट ५ वर्षको कैद सजाए पाएका चौधरी मोरङ कारागार चलान भएका थिए । उनी कारागारको कैदी हुँदै नाइकेसम्म भए । कारागारबाट भाग्ने योजनाअनुरूप उनले आफ्नो आँखामा समस्या भएको जानकारी कारागार प्रशासनलाई गराए । तत्काल उनलाई उपचारका लागि कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार साहको कमाण्डमा विराट आँखा अस्पताल पुर्‍याइयो अनि अस्पतालको पुर्जीसमेत काटियो, तर उपचार गर्न छाडेर उनीहरूको मन यौनचाहना पूरा गर्नेतर्फ मोडियो । उनीहरू नजिकैको एक होटलमा पुगे ।यौनकर्मी महिलासँग भेटे । उनीहरूबीच १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने–दिने सहमति भयो । त्यसपछि पहिले कैदी चौधरीले यौनप्यास मेटे । यौनसम्पर्कपछि चौधरी बाहिर आए । आफूले यौनप्यास मेटाएपछि उनले आफ्नो साथमा आएका हवल्दार साहलाई पनि यौनसम्पर्क गर्न होटलको कोठामा पठाए । हवल्दार साह होटलको कोठाभित्र पसेको मौका छोपी चौधरी त्यहाँबाट फरार भएका थिए ।
उमेशले यौन प्यास मेटे । आफूसँगै गएका प्रहरीलाई यौनकर्मी महिला भिडाएर फरार भए । उनी फरार भएलगत्तै प्रहरीको फन्दामा पर्ने डरसँगै ९ दिन लुकेर बिताए । फरार भएको पहिलो दिन सुनसरीमा रहेका आफन्तकहाँ पुगे । रात परेपछि उर्लाबारीस्थित आफ्नो घर जाने तयारीमा रहेका चौधरीले आफ्नो योजना एकाएक परिवर्तन गरे । प्रहरीले रातदिन घरमा विशेष निगरानी गरेको थाहा पाएपछि उनले तत्कालै अर्को जुक्ति निकाले— काठमाडौं पस्ने ।काठमाडौंमा पाँच–छ दिन रमाइलो गर्ने र त्यसपछि भारततर्फ लाग्ने योजना बनाएर उनी काठमाडौं हान्निए । जेलबाट फरार भएको तेस्रो दिन चौधरी पथरीबाट साथीको सहयोगमा रात्रिबस चढेर काठमाडौंतर्फ लागे भने फरार भएको पाँचौं दिन बिहान उनी काठमाडौं उत्रिए ।
को हुन् फरार कैद३० वर्षीय उमेश चौधरीको स्थायी घर मोरङको उर्लाबारी हो । अवैध लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परी २०७२ चैत २ गते अदालतबाट पाँच वर्षको कैद सजाय पाएका चौधरीलाई त्यसपछि मोरङ कारागार चलान गरिएको थियो । उनी कारागारको कैदी हुँदै नाइकेसम्म भएका थिए । चौधरी सेटिङ मिलाएर यौनप्यास मेट्ने क्रममा प्रहरीलाई झुक्याएर भागेका थिए ।
११ फागुनको साँझ सिन्धुलीका विशाल खड्काले प्रेमिका शर्मिला राउत र आफ्ना दुईजना साथी गायक असब सेवा तथा विपीन मैनालीलाई कोटेश्वरको एक रेस्टुराँमा पार्टी दिए । टन्न रक्सी पिएपछि रमाइलोका लागि उनीहरू चारै जना ट्याक्सी चढेर ठमेल हान्निए ।ठमेलमा रमाइलो गर्दैमा बिहान ३ बजिसकेको थियो । निन्द्रा लागेपछि चारै जना होटल खोज्दै सुन्धारा पुगे । उनीहरूले सुन्धारास्थित होटल निकुद एन्ड गेस्ट हाउसको कोठा नंं. १०४ र १०५ बुक गरे । विशालले आफू प्रेमिकासँगै होटलको कोठा नंं. १०४ मा सुतेको र साथीहरू असब र विपीन १०५ मा नम्बरमा सुतेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।रातभरि मस्ती गरेर प्रेमीसँगै सुतेकी शर्मिला भोलिपल्ट मृत अवस्थामा भेटिइन् । १२ फागुनको बिहान ९ बजे विशालले नै प्रहरीलाई खबर गरेर शर्मिलाले आत्महत्या गरेको बताए । जनसेवा र अपराध महाशाखाको प्रहरी टोली होटल पुग्यो । त्यहाँ पुग्दा शर्मिला मृत अवस्थामा थिइन्, उनीहरू सुतेको कोठामा २ वटा वियरको बोतल समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रेमीसँगै सुतेकी शर्मिलाले अचानक किन आत्महत्या गरिन भन्ने कुरा रहस्यमय बन्दै गएको छ । प्रहरीले उक्त घटनामाथि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । शिक्षण अस्पतालमा शर्मिलाको मृत शरीरको पोष्टमार्टम भए पनि त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ जनसेवाका डिएसपी टेकुनन्द इवालिम्बुले आफूहरूले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको बताए । उनले साप्ताहिकसँग भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं, पोष्टमाष्र्टम रिपोर्ट पनि आइसकेको छैन्, त्यो पनि घटनाको अनुसन्धानका लागि एउटा आधार बन्ला । कानुनी रूपमा पनि हामीले घटनाको अनुसन्धानलाई जारी राखेका छौं ।’
शर्मिलाको परिवारले घटना रहस्यमय भएको भन्दै प्रेमी विशाल, गायक असब सेवा तथा विपीन मैनालीमाथि किटानी जाहेरी दर्ता गरेको छ । घटनाको किटानी जाहेरी दिइएका २१ वर्षीय विपीन काभ्रे पाँचखालका हुन् । उनी, ज्येष्ठ आडियोलोजी सहकारीमा कलेक्टरको काम गर्छन् भने उदयपुर गाईघाटका २० वर्षीय असब सेवा अध्ययनसँगसँगै गायनमा समेत सक्रिय छन् ।विशाल भने मोडलिङसँगै रिन्को ओभरसिजको म्यानेजरका रूपमा काम गर्थे । मोडलिङ र फेसनमा समेत सक्रिय शर्मिला पहिले त्यही म्यानपावरमा कार्यरत छन् । पछि, विशालले कोटेश्वरमा आरएन नामक रेस्टुराँ सञ्चालनको तयारी गरेपछि शर्मिला म्यानपावरको जागिर छाडेर रेस्टुराँ निर्माणको कामको रेखदेखमा सक्रिय थिइन् ।
विशालले आफूहरू कोटेश्वरमा रक्सी पिएर ठमेल गएको, त्यहाँ सुत्ने ठाउँ नभेटिएपछि सुन्धारा पुगेको कुरा प्रहरीलाई बताएका छन् । उनले ठमेलबाट फर्केर सुत्ने बेलामा प्रेमिकासँग शारीरिक सम्बन्ध भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, त्यो सहमतिमै भएको र आफूहरूबीच कुनै त्यस्तो असहमति नरहेको दाबी उनको छ । रक्सीको ह्याङ र यौनसम्पर्कपछि थकित भएर आफू सुतेको बेला शर्मिलाको मुखबाट झरेको चिसो फिज आफ्नो शरीरमा परेपछि बिउझिएको र शर्मिला फ्यानमा पासो लगाएर झुन्डिरहेको देखेको उनको दाबी छ ।खड्काले आफूले तत्कालै शर्मिलाको पासो फुकालेर बेडमा निकाल्दा उनको मृत्यु भैसकेको बताएका छन् । यो कुरा तत्काल साथीहरूलाई खबर गरे लगत्तै सबै जना तल ओर्लिएर जनसेवा प्रहरीलाई खबर गरिएको खड्काको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र मधेस भन्दै लडिरहेका